वान डे सिरिजः खाता नखोल्दै भारतले गुमायो पहिलो विकेट! - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं, फागुन २१ । अष्ट्रेलिया विरुद्धको एकदिवसीय सिरिजको दोस्रो खेलमा भारतले खराब शुरुवात गरेको छ । उसले खाता नखोल्दै पहिलो ओभरको अन्तिम बलमै पहिलो विकेट गुमाएको छ । भारतले पहिलो विकेटका रुपमा रोहित शर्मालाई शून्य रनमा गुमाएको हो ।
उनलाई पहिलो ओभरको अन्तिम बलमा प्याट कमिन्सले क्याच आउट गराए । आज भारतले टस हारेर ब्याटिङको मौका पाएको छ । भारतले पाँच खेलको सिरिजमा १—० ले अग्रता लिएको छ । आज भारत आफ्नो जित यात्रालाई कायम गर्न चाहन्छ । यस्तै, अष्ट्रेलिया पहिलो जीतका लागि संघर्ष गर्दैछ । हेर्नुस् दुवै टिममा को–कोले पाए स्थान?
ट्याग्स: india vs australia, Rohit Sharma